खुल्यो मोनालिसाको मुस्कान रहस्य
वैज्ञानिकहरुले लियोनार्दो दा भिन्ची निर्मित मोनालिसाको प्रख्यात पेन्टिङको रहस्य पत्ता लगाएका छन् । मोनालिसाको अनुहारको भाव किन हरेक मानिसका लागि हरेक समयमा फरक–फरक लाग्छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाइएको हो।
लामो समयदेखि कलाप्रेमी तथा समीक्षकबीच मोनालिसाको अनुहारको भाव मुस्कान हो या अरु नै हो भन्ने विषयमा विवाद रहँदैं आएको छ । तर युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका वैज्ञानिकहरुले मोनालिसाको परिवर्तन भैरहने अनुहारको रहस्य पत्ता लगाएका हुन् । अध्ययनका अनुसार पेन्टिङ कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हेर्ने मानिसको मूड या भावमा भर पर्छ ।
दृश्य ग्रहण र न्यूरोलोजीका विषयमा गरिएको प्रयोगबाट मानिसको भावअनुसार एउटा स्थिर अनुहार पनि फरक–फरक देखिन्छ भन्ने अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाएका हुन् ।
मोनालिसाको यही पेन्टिङ हेर्न विश्वभरबाट बर्सेनि लाखौं पर्यटक लुभ्र संग्रहालय पुग्छन् । अधिकांशले पेन्टिङको सुन्दरताको बयान गर्छन् । सन् २००५ मा नेदरल्याण्डको एम्स्टर्डमका वैज्ञानिकहरुले मोनालिसाको अनुहारको भाव पहिचान गर्ने सफ्टवेयरको मद्धतले अनुसन्धान गरेका थिए ।
जसअनुसार ८३ प्रतिशत खुशी भाव छ भने ९ प्रतिशत बेखुशी, ६ प्रतिशत डराएको भाव र २ प्रतिशत रिसको भाव छ । अहिले विज्ञानले पत्रकार तथा जीवनीलेखक वाल्टर आइज्याकसनको भनाईलाई पुष्टि गरेको छ । उनले भनेका थिए, ‘मोनालिसा मेरा लागि महान भावयुक्त पेन्टिङ हो, जसको मुस्कानमा कला र विज्ञान दुवै छ ।’
डा. एरिका सिगेल र उनको टीमले कसरी मानिसको भावले दृष्टिकोणलाई नै परिवर्तन गर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरेको थियो । यो विषय ‘मानव मष्तिष्क प्रतिक्रियात्मकभन्दा पनि भविष्यद्रष्टा अंग हो’ भन्ने आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित रहेको डा. सिगेलको भनाई छ ।